Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, velona | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Hatrany am-boalohany dia sitrapon'Andriamanitra ny hisafidianan'ny olona ny hazo izay mamelona azy. Tian'Andriamanitra hiray amin'ny fanahin'olombelona amin'ny alàlan'ny Fanahiny Masina. Nolavin'i Adama sy i Eva ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra satria nino ny lainga nataon'i Satana izy ireo nefa tsy nanana fiainana tsaratsara kokoa raha tsy misy ny fahamarinan'Andriamanitra. Taranak’i Adama isika, nandova ny heloky ny ota taminy. Raha tsy misy fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, dia teraka ara-panahy isika ary tsy maintsy maty amin'ny faran'ny fiainantsika noho ny fahotantsika. Ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy no mitondra antsika amin'ny làlan'ny fahaleovan-tena tsy miankina amin'Andriamanitra ary mitondra antsika ho faty. Raha avelantsika ny Fanahy Masina hitarika antsika dia fantatsika ny helokay sy ny toetrantsika manota. Ny vokatr'izany dia mila fanampiana isika. Ity no fepetra takiana amin'ny dingana manaraka:
"Nampihavanina tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalony" (Romana 5,10 Baiboly Fiainana Vaovao). Jesosy dia nampihavana antsika amin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fahafatesany. Betsaka ny Kristiana no mijanona amin'io tranga io. Sarotra amin'izy ireo ny miaina fiainana mifanaraka amin'i Kristy satria tsy azony ny ampahany faharoa amin'ilay andininy:
«Avy eo, indrindra fa efa nanjary sakaizany isika, dia ho voavonjy amin'ny fiainan'i Kristy» (Romana 5,10 Baiboly Fiainana Vaovao). Inona no dikan'ny ho voavonjy amin'ny fiainan'i Kristy? Izay rehetra an'i Kristy dia nohomboana sy niara-nalevina taminy ary tsy afaka manao na inona na inona momba ny tenany. Kristy dia nitsangana mba hameno ny fiainany amin'ireo olona izay niara-maty taminy. Raha maka ny fiainan'i Jesosy ho famonjena anao ary koa ny fampihavanana, dia efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Noho ny finoan'i Jesosy, izay ekenao dia miaina ao aminao i Jesoa. Nahazo fiainana ara-panahy vaovao tamin'ny alalany ianao. Fiainana mandrakizay! Tsy azon'ireo mpianatr'i Jesosy izany fatra ara-panahy izany alohan'ny Pentekosta, fony tsy mbola tao amin'ny mpianatra ny Fanahy Masina.
Telo andro izay no nanamelohana an'i Jesosy sy nohomboana ary nalevina. Ny mpianany roa dia nandeha an-tongotra nankany amin'ny vohitra atao hoe Emmaus: «Nifampiresaka momba izany rehetra izany izy ireo. Ary rehefa niresaka sy nifanakalo hevitra toy izao izy, dia nanakaiky Jesosy ka niaraka taminy. Fa ny mason'izy ireo dia nijery ka tsy nahafantatra azy » (Lioka 24,15-16).
Tsy nanantena ny hihaona amin'i Jesosy eny an-dalana izy ireo satria nino fa maty i Jesosy! Ka tsy nino ny filazan'ny vehivavy fa velona izy. Ny mpianatr'i Jesosy dia nieritreritra: Fa angano tsy misy dikany ireny! «Ary hoy i Jesoa taminy: Inona avy ireo zavatra ifanakalozanao hevitra ireo teny an-dalana? Avy eo dia nijanona izy ireo » (Lioka 24,17). Io no mariky ny olona iray izay mbola tsy nihaona tamin'ny maty nitsangana tamin'ny maty. Mampalahelo izany ny Kristianisma.
"Ary ny iray atao hoe Cleopas, namaly ka nanao taminy hoe: Moa ianao irery va no vahiny any Jerosalema izay tsy mahalala izay nitranga tao tamin'izany andro izany? Ary izy (Jesosy) nanao taminy hoe "Ahoana ary?" (Lioka 24,18-19). Jesosy no mpandray anjara mavitrika sy tsy mino ka afaka manazava izany aminy:
"Ary hoy ireo taminy: I Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany, mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona rehetra; ny nanoloran'ny mpisoronabe sy ny lehibentsika azy azy hanamelohana azy ho faty ary nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa io no hanavotra ny Isiraely. Ary izany rehetra izany dia efa fanintelony androany izay nitranga » (Lioka 24,19-21). Ny mpianatr'i Jesosy dia niresaka tato anatin'ny lasa teo. Nanantena izy ireo fa hamonjy an'i Israely i Jesosy. Nandevina izany fanantenana izany izy ireo taorian'ny nanatri-maso ny fahafatesan'i Jesosy ary tsy mino ny fitsanganany tamin'ny maty.
Iza no manahirana anao an'i Jesosy? Moa ve izy lasa olo-manan-tantara izay niaina sy maty tamin'ny 2000 taona lasa? Ahoana no fahatsapanao an'i Jesosy anio? Miaina izany amin'ny fotoana rehetra iainanao ve ianao? Sa ve miaina amin'ny fahatsiarovan-tena fa nampihavaniny taminao tamin'ny alàlan'ny fahafatesany ary manadino ny tanjon'ny antony nitsanganan'i Jesosy?
Namaly ny mpianatra roa i Jesosy hoe: "Moa tsy tokony hijaly izany va Kristy ary hiditra amin'ny voninahiny? Ary izy (Jesosy) dia nanomboka tamin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra ary nanazava taminy izay nolazaina taminy tao amin'ny soratra masina rehetra » (Lioka 24,26-27). Tsy fantatr'izy ireo izay nolazain'Andriamanitra mialoha momba ny Mesia.
"Ary raha nipetraka teo amin'ny latabatra izy ireo, dia nandray ny mofo izy, nisaotra azy, namaky sy nanolotra azy ireo. Dia nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy. Ary nanjavona izy ireo » (Lioka 24,30-31). Fantatr'izy ireo izay nolazain'i Jesosy taminy ary nino ny teniny fa mofo ny fiainana izy.
Any amin'ny lafiny hafa mamaky: «Fa ity no mofo avy any an-danitra, izay manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Dia hoy ireo taminy: Tompoko, omeo anay foana ny mofo toy izany. Fa hoy Jesosy taminy: Izaho no mofon'ny fiainana. Izay manatona ahy tsy mba noana; ary izay mino ahy tsy hangetaheta intsony » (Jaona 6,33-35).
Izany dia mitranga rehefa tena nihaona tamin'i Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty ianao. Hiaina sy hankafy karazana fiainana toy ny efa niainan'ny mpianatra izy ireo: "Ary nifampiresaka izy ireo hoe: Tsy efa nandoro anay ve ny fontsika satria niresaka tamintsika teny an-dalana izy ary nosokafana ny soratra masina tamintsika?" (Lioka 24,32). Rehefa hihaona aminao i Jesosy amin'ny fiainanao dia hanomboka ny fonao. Ny fiainana ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia fiainana! Jesosy, izay eo sy velona, ​​mitondra hafaliana. Nianatra an'izany ny mpianany taty aoriana kely: «Satria mbola tsy afaka nino azy ireo tamim-pifaliana sy nanontany tena izy ireo» (Lioka 24,41). Inona no tian'izy ireo? Momba ny nitsanganan'i Jesosy nitsangana!
Ahoana no fomba namaritan'i Petera ny fifaliana? «Tsy mbola nahita azy ianao ary mbola tia azy; ary ankehitriny mino azy ianao na dia tsy mahita azy aza ianao; nefa ho faly sy hafaliana mahafinaritra tsy takatry ny saina ianao rehefa tratranao ny tanjon'ny finoanao, dia ny fahasambaran'ny fanahy » (1 Petera 1,8: 9). Niaina ity fifaliana tsy azo fehezina sy be voninahitra ity i Peter rehefa nihaona tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty.
"Izy, dia hoy i Jesoa taminy: Izao no teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo: tsy maintsy ho tanteraka ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo ny zavatra rehetra nosoratako. Avy eo dia nampahafantariny azy ireo fa azony ny soratra masina » (Lioka 24,44-45). Inona ilay olana? Ny fahatakaranao no olana!
"Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nieritreritra ny mpianany fa nilaza izany izy ary nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy" (Jaona 2,22). Ireo mpianatr i Jesosy dia tsy nino ny tenin'ny Soratra Masina ihany koa fa nino izay nolazain'i Jesosy taminy. Nahatsapa izy ireo fa ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Taloha dia aloky ny ho avy. Jesosy no votoatiny marina sy zava-misy marina anoratan'ny Soratra Masina. Ny tenin'i Jesosy dia nanome azy ireo fahatakarana sy fifaliana vaovao.
Mandefa ireo mpianatra
Raha mbola velona Jesosy, dia nandefa ny mpianany hitory ny mpianany. Inona no hafatra notorin'izy ireo tamin'ny olona? "Nivoaka izy ireo ka nitory fa ireo bus tokony hatao ary nandroaka demonia maro ary nanosotra menaka maro tamin'ny menaka ary nahasitrana azy ireo" (Marka 6,12-13). Nitory tamin'ny olona ny mpianatra mba hibebaka. Tokony hiala amin'ny fomba fanao taloha ve ny olona? Eny! Ampy ve izany raha misy olona mandeha bus ary tsy mahalala zavatra hafa? Tsia, tsy ampy izany! Fa maninona izy ireo no tsy nilaza tamin'ny olona momba ny famelan-keloka? Satria tsy nahalala na inona na inona momba ny fampihavanana an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
"Avy eo dia nampahafantariny fa azon'izy ireo ny hevitry ny Soratra Masina, ary hoy izy taminy: Voasoratra fa hijaly Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; ary ny fitoriana dia amin'ny anarany ny fibebahana hamela heloka amin'ny olona rehetra » (Lioka 24,45-47). Ny fihaonana tamin'i Jesosy velona dia nanome fahatakarana vaovao ny vaovao nitsangana sy vaovao, ny fampihavanana amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra.
"Fantaro fa tsy navotana ianao tamin'ny volafotsy na volamena tsy azo lavina amin'ny fanaovan'ny ray, fa amin'ny ra lafo an'i Kristy ho zanak'ondry tsy misy tsiny sy tsy misy pentina" (1 Petera 1,18: 19).
I Peter, izay niezaka ny hisorohana ny fandatsahan-dra tao Kalvary dia nanoratra ireo teny ireo. Tsy afaka mahazo na mividy fanavotana ianao. Nanome fampihavanana an'Andriamanitra taminny fahafatesan'ny zanany. Izany no fepetra voalohany ahazoana fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra.
"Ary hoy indray i Jesosy taminy: Fiadanana ho anao! Tahaka ny nandefasan'ny ray ahy anao, dia iriko ianao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nitsoka azy ireo ary nanao taminy hoe: Raiso ny Fanahy Masina! » (Jaona 20,21-22).
Ary notafihin'Andriamanitra tao amin'ny oron'i Adama tao amin'ny saha Edena ny fofon'aina ary tonga olombelona izy. "Araka ny voasoratra hoe: Adama, olona voalohany, tonga zavaboary, ary Adama farany tonga fanahy manome fiainana" (1 Korintiana 15,45).
Manome fiainana ny olona teraka tamin'ny fahafatesana ara-panahy amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy ny Fanahy Masina. Ireo mpianatr'i Jesosy dia mbola tsy velona ara-panahy tamin'izany.
«Rehefa niara-nipetraka tamin'izy ireo teo am-pisakafoanana izy, dia nandidy azy ireo tsy hiala ao Jerosalema, fa hiandry ny fampanantenan'ny Ray, izay nolazainy fa renareo tamiko; satria Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa tokony hatao batisa amin'ny Fanahy Masina ianao, tsy ela taorian'ny andro ireo » (Asan’ny Apostoly 1,4: 5).
Ny mpianatr'i Jesosy dia tokony atao batisa miaraka amin'ny Fanahy Masina amin'ny Pentekosta. Izany no fahaterahana indray sy fitsanganana amin'ny maty ara-panahy ary ny antony nahatonga an'i Adama faharoa, Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao hanatanteraka izany.
Ahoana ary oviana i Petera no teraka indray? «Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nody indray taorian'ny famindrampony lehibe noho ny fanantenana velona amin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty» (1 Petera 1,3). Teraka indray i Petera tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy.
Tonga tety an-tany Jesosy mba hamelona ny olona. Jesosy dia nampihavaninny olombelona taminAndriamanitra tamin'ny fahafatesany ary nanao sorona ny vatany ho antsika. Nomen'Andriamanitra fiainana vaovao isika mba hahafahany mitoetra ao amintsika. Tamin'ny Pentekosta dia tonga tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina i Jesosy tao am-pon'ireo izay nino ny tenin'i Jesosy. Fantatr'izy ireo fa amin'ny alàlan'ny fijoroan'ny Fanahy Masina fa mipetraka ao amin'izy ireo. Nataony velona ara-panahy izy! Manome azy ireo ny fiainany, ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay.
"Fa raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao aminao, dia Ilay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanao mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao aminao" (Romana 8,11). Mampianatra anao koa i Jesosy: Tahaka ny nanirahan'ny Ray ahy, dia Izaho no naniraka anao (taorian'i Jaona 17,18).
Ahoana no ahitantsika hery avy amin'ilay loharano tsy manam-petra? Nitsangana Jesosy mba hiaina sy miasa ao aminao. Inona no fanomezan-dàlana omenao azy sy omenao azy? Ianao ve manome fahefana an'i Jesosy hitondra ny sainao sy ny fahatsapanao, ny eritreritrao, ny sitraponao, ny fanananao manontolo, ny fotoananao, ny hetsika rehetra ataonao ary ny maha-olombelona anao? Ny mpiara-belona aminao mety hambara avy amin'ny toetranao sy ny fitondran-tenanao.
«Minoa ahy fa ao amin'ny ray aho ary ny ray ao amiko; raha tsy izany dia minoa noho ny asa. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino ahy dia hanao ny asa ataoko ka hataony lehibe noho ireo; satria mankany amin'ny ray aho » (Jaona 14,11-12).
Avelao hiasa ao aminao ny Fanahin'Andriamanitra mba hanaiky tamim-panetren-tena fa ianao no tsy afaka manao na inona na inona ho an'ny tenanao. Miezaha manana fahalalana sy matoky fa Jesosy, izay mipetraka ao aminao ary afaka hanao na inona na inona aminao. Lazao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra sy amin'ny fotoana rehetra izay tokony hataony aminao araka ny sitrapony amin'ny teny sy ny asa.
Nanontany tena toy izao i David: "Inona ny lehilahy izay heverinao aminy sy ny zanak'olombelona no ahaharahanao azy? Nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, tamin'ny satro-boninahitra sy voninahitra. (Salamo 8,5: 6). Izany lehilahy izany ao anatin'ny tsy fahaizany amin'ny toerany mahazatra. Ny Kristianisma dia fanjakana ara-dalàna amin'ny olombelona rehetra.
Misaora an'Andriamanitra miverimberina foana fa mipetraka ao aminao izy ary avelany hanatanteraka anao izy. Misaotra anao mankasitraka, ity zava-dehibe ity dia miforona aminao!